vendredi, 25 novembre 2016 20:15
Manakana Lokoho : Nanao tsipaipaika ny Fokonolona nampidirana rano ao an-tanàna
Leo tamin’ny fampanantenana politika ary lasa fitadiavam-bato izahay teto Manakana Lokoho, Distrika Sambava raha mba nitaraina tamin’ireo mpitondra taty amin’ny Faritra, fa sahiran-drano. Rano maloto eny amin’ny renirano Lokoho no sotroinay tsy fidiny nandritra ny taona maro izay hoy ny Ray aman-dreny Raveloson Razafimaly raha nandray fitenenana nandritra ny fampafantarana ny zava-bita teto Manakana omaly tolak’andro. Vola mitentina eo amin’ny 5 hetsy Ariary no azo avy tamin’ny tsipaipaika nataon’ny vahoaka rehetra. Nataonay izao tsy midika akory fa tsy hiankina amin’ny Fanjakana fa io no mba ezaka vitanay dia « Borne fontaine » iray izay hita fa mbola tsy ampy ho an’ny mponina rehetra eto fa azo hiafiana.
vendredi, 25 novembre 2016 13:21
AJS 67ha Atsimo : Fitokanana ny kianja filalaovana tsipy kanety be
Notokanana anio ny Boulodrome vaovao etsy amin'ny fokontany 67ha atsimo. Ny fikambanana Association des jeunes de 67ha sud (AJS) no tompon'antoka tamin'ny fanamboarana ary ny Ambassade de France no namatsy vola. Araky ny nambaran'i Cedric Djavo, izay tompon'antoka amin'izao fanantontosana izao, dia matoa mijoro ety anivon'ny fokontany ny fotodrafitrasa momba ny tsipy kanety be, dia efa miparitaka sy ankafizin'ny tanora izany taranja izany, isika rahateo hoy izy no andray ny fifaninana maneran-tany izany tsipy kanety be izany amin'ity taona ity.
vendredi, 25 novembre 2016 05:48
Lalam-pirenena faha-fito : Tsy hisy intsony ny fivezivezena tsy voaaro
Nanamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ny mpitatitra ny komandin'ny Zandarimariam-pirenena eto Fianarantsoa. Haka fepetra ny mpitandro filaminana manoloana ny tsy fanarahana ny toromarika ataon'ireo mpitatitra sasantsasany. Misy tokoa mantsy ireo mpitatitra no minia tsy mandray andraikitra amin'ny rindra sy lamina fitondràna Zandary anaty fiara ho fiarovana ny mpandeha. Tsy hisy intsony ny fivezivezena tsy voaaro raha ny voalaza nandritra ny fivoriana natrehan'ny sehatra roa teny amin'ny toby Tsaramandroso. Haka fepetra vaovao ihany koa ireo Zandary manao ny asany momba ny fifamoivoizana manoloana ny olona mampiahiahy. Nentanina ny mponina manamorona ny lalam-pirenena faha-fito mba hampihatra ny toromarika efa nomena azy ireo ho fisorohana ny asa ratsy. Niantso ny rehetra ny kolonely Razanakoto Andrianirina Yvon, komandin'ny Zandarimariam-pirenena eto an-toerana mba hifanome-tanana eo am-panatanterahana ny asa fanarahamaso ny olona mivezivezy sy ny anjara andraikitry ny kalony, ny fampiasana ny bokimbahiny, ary ny fisavàna ny karine-pasipaoro.
jeudi, 24 novembre 2016 14:10
Maintirano : Dahalo telo maty notifirina tsy lavitra ny seranam-piaramanidina
Tratra ambodiomby teo ampangalarana omby miisa 20 mahery izy telo lahy ireto. Tsy afa-nihetsika ireto farany satria dia ireo mpiray dina no nahatratra azy ireo ka noraisim-potsiny ary dia niharan’ny dina. Famonoana ho faty ho an’izay tratra ambodiomby, ary dia notanterahina tsy lavitra ny seranam-piaramanidina izany.
jeudi, 24 novembre 2016 14:09
Maintirano: Tovolahy iray 18 taona tapa-tongotra narapaky ny voay
Teo amin’ny renirano mampifandray an’i Manombo sy Ankasakasa no nitranga ny loza efa ho efatr’andro lasa izay. Tovolahy iray avy any Ambohipaky no niampita io renirano io ka nokakerin’ny voay. Tapaka ny tongony havanany. Mbola tafakatra teo amoron-dano izy ary teo no hitan’ny olona ka nentina namonjy hopitaly avy hatrany mba hanaraka fitsaboana.
jeudi, 24 novembre 2016 13:32
Mahajanga : Misy gadra tafavoaka ny fonjaben’i Marofoto
Efa ho herinandro mahery izay no nandeha ny feo eto Mahajanga fa tafavoaka ny fonja i Manjota. Lehihaly iray 40 taona izy io ary mbola mamita sazy ao am-ponjan’i Marofoto vokatry ny fanafihana mitam-basy nataony teto Mahajanga. Voalaza fa natao irakiraka i Manjota tao amin’ny toerana izay nametrahana azy ka izay no nanararaotany nivoahana ny varavaran’ny fonja, ary tsy hita hatramin’izao. Manao fikarohana azy ny mpitandro ny filaminana eto Mahajanga amin’izao fotoana izao ary miantso fiaraha-miasa amin’ny vahoaka amin’izany.
jeudi, 24 novembre 2016 11:56
Sambava : Tsy manaiky ny hampidinana ny sarandalana ny Taxi
Miteraka fifanolanana eo amin’ny mpandeha sy ny mpamily Taxi ny fepetra noraisin’ny Prefe hamerenana ny sarandalana amin’ny Taxi, na 4L na Bajaj, tsy hihoatra ny 800 Ariary raha 1000 Ariary izany hatramin’ny niakaran’ny lavanila. Noraisin’ny Prefektiora io famerana sarandalana io taorian’ny nandalovan’ny Praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier taty an-toerana, nanome toromarika mba tsy hisian’ny fanararaotana manoloana ny fiakaran’ny vidin’ny lavanila. Tsy manaiky anefa ny Taxi ka lasa mikorontana ny mpanjifa sy ny mpamily.
jeudi, 24 novembre 2016 10:46
Kaominina Ivato : Hifampizara traikefa amin’ireo Ben’ny tanàna avy any Anôsy
Handray delegasiona avy any amin’ny Faritra Anôsy sy Ben’ny tanàna maromaro ny Kaominina Ivato, vavahadin’i Madagasikara anio, hanao fifampizarana traikefa.
jeudi, 24 novembre 2016 07:41
Vatomandry : May ny trano fonenan’ny mpiasa fonja
Trano mifampitohy ahitana efitra valo no nirehitra, ka may tsy nisy noraisina ny entana tao anatiny. Pitik’afo tamin’ny nahandro no niandohan’ny loza. Mpandraharahan'ny fonja telopolo eo no traboina. Tsy nisy ny mpiasan’ny fonja maty na voafonja nitsoaka. Tsy may koa ny biraon’ny fandraharahan’ny fonja eto Vatomandry. Manao tsipaipaika ny mpandraharaha ny fonja ao Toamasina hanampiana ireo namany traboina, ary manao antso avo amin’ireo malalatanana hifanampy amin’izy ireo.
jeudi, 24 novembre 2016 07:12
Fanafihana mitam-piadiana : Nafahan’ny Fitsarana noho ny fisalasalana ilay Zandary
Voarohirohy tamina fanafihana mitam-basy tokantrano iray teto Sambava tamin’ny volana aogositra 2015 ity Zandary ity. Vola mitentina 20 tapitrisa Ariary no voaroba tamin’io. Nilaza ho nahafantatra azy avy hatrany ny tompontrano voatafika raha latsaka ny sarontavany, ary nitondra ny raharaha teny anivon’ny polisy teto Sambava. Nosamborina, ary notazomina am-ponja vonjimaika tao Antalaha nandritra ny herintaona sy telo volana izy. Niakatra Fitsarana androany ny raharaha. Nanomboka tamin’ny folo ora maraina ny fitsarana ary tsy nifarana raha tsy tamin’ny iray ora sy fahefany. Nilatsaka ny didy taorian’izay, ka afaka noho ny fisalasalana ilay Zandary.
Page 212 sur 326